လင်္ကာ: နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ပေးရေး နဲ့ပတ်သက်လို့..ဦးရွှေမန်း ပြောကြားချက်အား သုံးသပ်ခြင်း
ဒီကနေ့ထုတ် သတင်းစာပါ ခမောက်တံဆိပ်သည် NLD နှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါကြောင်းကြေငြာစာ
0 Comments - 11 Dec 2011
ဦးရွှေမန်းပြောသွားတဲ့ အချက်ထဲမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မိတာကတော့(အကျဉ်းသားထဲကမှ အားလုံးပါဝင် နိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံ့အရေးနဲ့ပတ်သက် လို့ စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ လုပ်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ အထူးဦးစားပေး စဉ်းစားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပါ မယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။ )
ဖော်ပြပါ စကားရပ်အရဆိုလျှင်…ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုမင်းဇေယျာ ၊ ကိုကိုကြီး ၊ ကိုဌေးကြွယ် အပါဝင် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေ၊ရွှေဝါရောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူတွေ၊နောက်တခါ..အခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှု့ကြောင့်ဖမ်းထားသူတွေအတွက်ကတော့ရှင်းတယ်လို့မြင်တယ်….ဘာလို့လည်းဆိုတော့…သူတို့က..နဂိုစလှုတ်ရှားကထဲကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး..စိတ်ဝင်စားလို့လုပ်လာခဲ့ကြသူတွေ….အမြဲ လည်းစိတ်ဝင်စားနေဦးမှာပဲ…..သို့သော်တဘက်မှာ…လူထုနဲ့…နိုင်ငံတကာမသိနိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့….အခုအကျဉ်းကျနေတဲ့…နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆီကိုသွားရောက်ပြီး….လက်ရှိအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးမလုပ်ပါဘူး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုအနှောက်အယှက်မပြုပါဘူး…နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို ပျက်ပြားအောင်မလုပ်ပါဘူး…ဆိုတဲ့ခံဝန်ကတိတွေကိုတောင်းဆိုတာမျိုး….လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့……နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဆိုတဲ့…ကြွေးကြော်တောင်းဆိုမှု့တွေက…ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမှာပါပဲ……အခုလို လုပ်ရပ်မျိုးတွေ လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း….တော်တော်များများက လုပ်ဆောင်ကြမှာ မဟုတ်သလို…..ဦးရွှေမန်း ဟီလာရီ ကလင်တန်လာတုန်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးမှာပါဆိုတဲ့..ကတိဟာ…မဖျက်ပဲနဲ့..ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်…..
စကားကုန်ကုန်ပြောရရင်…ကျနော်တို့ အကျဉ်းထောင်အတွင်းက လွတ်မြောက်ခဲ့တုန်းက…စစ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးပါမယ်လို့ ကတိပေးလွှတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး…..ဒါ့ကြောင့် အဲဒီအချိန်တုန်းကလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြစ်မှု့ဆိုင်ရာ…ဥပဒေပုဒ်မ(၄၀၁)နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်…..ပြစ်မှု့ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ( ၄၀၁ ) ဆိုတာ…ကျန်ရှိပြစ်ဒဏ်များကို ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းပါ……( ၁၀ နှစ်ကျတဲ့သူတွေက…လေးနှစ်နေပြီးသားဆို…ခြောက်နှစ်ကျန်တယ်....တကယ်လို့ ပြင်ပမှာ…သူတို့ကဆန့်ကျင်ရေးလုပ်မယ်ဆို….ကျန်တဲ့ပြစ်မှု့ခနထားဦး..ကျန်ရှိပြစ်ဒဏ်နဲ့တင်…ထောင်ထဲဆွဲထဲ့ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘော……ဒါပေမဲ့…နိုင်ငံရေး မလုပ်တော့ပါဘူးတို့…ဘာတို့ဆိုတဲ့..အညံ့ခံခံ ဒူးထောက်ခိုင်းတဲ့ ခံဝန်ကတိတွေကိုတော့ ဘယ်သူမှလည်း မထိုးခဲ့ရသလို…ဘယ်သူကိုမှလည်း အထိုးခိုင်းတယ်လို့မကြားပါ……အထက်ဖော်ပြပါပုဒ်မနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောပြီး…အဓိပ္ပါယ်ကိုပါ….ရွတ်ပြဘူးပါတယ်……ကျနော်တို့အားလုံးလည်း နားလည် သဘောပေါက်ပါတယ်….သို့သော် တလောက နောက်ဆုံး လွှတ်လိုက်တဲ့ အသုတ်မှာတုန်းကတော့..လုံးလုံးလွှတ်လိုက်သလိုလိုနဲ့…ထောင်ထွက် ၀ရမ်းပေါ် မှာ ပုဒ်မ ( ၄၀၁ ) နဲ့ လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာရေးသားဖော်ပြထားကြောင်း တချို့လွတ်မြောက်လာသူတွေ ကတဆင့်သိရှိရပါတယ်……ကျနော်ဆိုလိုတာက…အခုလွှတ်ပေးမဲ့သူများသည်….အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများကိုယ်တိုင်က…ကတိက၀တ်များပေးပြီး…လွှတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်…ရိုးသားဘို့တော့လိုပါလိမ့်မည်…မည်သည့်နှောင်ကြိုးများမှချည်နှောင်ခြင်းမရှိပဲ…အကြွင်းမဲ့လွှတ်ပေးဘို့လိုပါလိမ့်မည်….သို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်…အခုလွှတ်ပေးပြီး… နောက်တပတ်လောက်မှာပဲ…ကျန်ရှိပြစ်ဒဏ်နဲ့ ထောင်ထဲထပ်သွင်းဦးမယ်ဆိုရင်တော့…..ကျနော် တင်ပြခဲ့သလိုပဲ…..နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ပေးဆိုတဲ့..တောင်းဆိုမှု့တွေက ညံနေဦးမှာပါပဲ……။
ဦးရွှေမန်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာနားမလည်တာလား…နားမလည်ဟန်ဆောင်တာလားဆိုတာ…တခုမေးချင်ပါတယ်……ဒါဘာလည်းဆိုတော့…နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့ပဲပြောပြော…ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားလို့ပဲဆိုဆို….ကျနော်သဘောပေါက်သလောက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရရင်….မြန်မာနိုင်ငံက..အာဏာရှင်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေ သက်တမ်းတလျှောက်မှာ…ခင်ဗျားတို့ကို မကျေနပ်လို့ ( မကြိုက်လို့၊မနှစ်သက်လို့၊ အလိုမရှိလို့ ) နည်းပေါင်းစုံနဲ့ဆန့်ကျင်ကြသူတွေ…အဲဒီလိုဆန့်ကျင်ခြင်းကြောင့်..သူတို့ကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ပြစ်မှု့ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ အမျိုးမျိုးတပ်ထောင်ချထားသူများ….( သို့မဟုတ် ) ထိန်းသိမ်းထားသူများ ကိုဆိုလိုပါတယ်…….
ဒီနေရာမှာ…အများပြည်သူလူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း မသိနိုင်လောက်ဘူးထင်တဲ့ အချက်ရှိနေပါတယ်…ဒါဘာလည်းဆိုတော့…စစ်အစိုးရသက်တမ်းတလျှောက်လုံးမှာ…နိုင်ငံရေးလှုတ်ရှားမှု့ကြောင့်ဖမ်းဆီးအရေးယူခံရသူဘယ်သူမဆို….ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု့များနဲ့သာပြစ်ဒဏ်စီရင်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်….နိုင်ငံရေးမှု့ဆိုတာသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး…….သို့သော်…သက်ဆိုင်ရာ..နယ်မြေခံအာဏာပိုင်များ၊ထောက်လှမ်းရေးများ၊အစိုးရအနေဲ့…ဘယ်သူ့ကို ဘာ့ကြောင့် ထောင်ချတယ်ဆိုတာ…အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာ ၊ မှတ်တမ်း ရှိပါတယ်…… ( ဆိုလိုတာက…သူတို့်ကို ဆန့်ကျင်လို့ ခင်ဗျားကို အမြင်ကပ်ပြီး…ရာဇ၀တ် ပုဒ်မတတ်ပြီး ထောင်ချပစ်လိုက်တာလား……ဒီအမှု့ကတော့….သူ့ဖာသာသူ…ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု့ကိုကျူးလွန်လို့ အပြစ်ပေးခံရတာလားဆိုတာ…..မှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်…..။ ) သာဓက အနည်းငယ်ပြောပြပါမယ်…….
ကျနော့်မြို့က…၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အနိုင်ရခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် … ဦးခင်ကျော်ဟန်….သူ့ကိုထောင်ချတုန်းက…ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု့ကြီးနဲ့ လုပ်ကြံထောင်ချတယ်…..အဲဒီ့ပြစ်မှု့နဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတာ..ဒေသတခုလုံးမှာရှိတဲ့လူထုအကုန်သိတယ်….ကျနော့်ကိုလည်း….၁၉၉၀မှာထောင်စချတော့….တရားမ၀င်လက်နှက်ကိုင်ဆောင်မှု့နဲ့ချတယ်….. ဒါပေမဲ့…ကျနော်တို့ထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါပုဒ်မ၅(ည)လိုပဲ….တိုက်ပိတ်ထားခံခဲ့ရတာပါ…..ရဲဘက်မထဲ့ခဲ့ပါဘူး….သူတို့မှာ မှတ်တမ်းအစစ်အမှန်တွေရှိပါတယ်….ဘယ်လို ရာဇ၀တ်မှု့ကြီးတွေနဲ့ပဲ ပြစ်ဒဏ် ချထားပါစေ …ဘယ်လိုကြောင့်ထောင်ချလိုက်တယ်ဆိုတာ…အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်….. ဦးရွှေမန်းတို့ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်…ရာဇ၀တ်မှု့ကိုသူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့ကြသူများနဲ့…ခွဲခြာ်းနိုင်ပါတယ်..မသိချင်ရောင်ဆောင် ရောတော့မချပါနဲ့ဗျာ……
သို့သော် ကျွှန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ….ပြောပြချင်တာလေးတခုတော့ရှိတယ်….( မကြိုက် မနှစ်သက်သောသူများလည်း ကလော်တုတ်နိုင်ပါတယ် )……. ဒီလိုပါ…ကျနော်အကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာရှိနေတော့….တချို့သောပါတီဝင်တွေ…နိုင်ငံရေးလှုတ်ရှားမှု့တွေမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးသူတွေထောင်ကျလာတာရှိတယ်….တကယ်က..သူတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ထောင်ကျ ကြတာ….( ဥပမာ…ချဲမှု့၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှု့၊လောင်းကစားမှု့၊ ကျန်တာတွေရောပေါ့ ) အမှန်ကချဲမှု့ဆို…သူ့ဖာသာသူတကယ်ချဲရောင်းလုပ်ကိုင်နေလို့အဖမ်းခံရပြီး….ထောင်ကျလာတာ…မူးယစ်ဆေးဝါးမူ့၊မိန်းမမှု့…တကယ်ကျူးလွန်လို့ဖြစ်ကြတာ….နိုင်ငံရေးလုပ်လို့အမြင်ကတ်ပြီးချလိုက်တာမဟုတ်….စုံစမ်းလိုက်ရင်ပေါ်တယ်….(ပါတီဝင်ဖြစ်တာ…နိုင်ငံရေးလှုတ်ရှားမှု့မှာပါဝင်ပတ်သက်တာက..တခြား)….ဒါပေမဲ့…ထောင်ထဲရောက်တော့…သူတို့က…နိုင်ငံရေးကြောင့် လုပ်ကြံပြီး..ထောင်အချခံလိုက်ရတာဆို.လုပ်ပါလေရော…..(အဲဒီ လိုလုပ်တဲ့သူတွေရှိ လို့ စာရင်းတွေက ရှုတ်ကုန်တာ…ကိုယ့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ခံပေါ့ ) လူအခွင့်ရေးလှုတ်ရှားမှု့အဖွဲ့တွေက စလို့…အတိုက်အခံအဖွဲ့အသီးသီးထံ သတင်းတွေရောက်အောင်ပို့ကြတယ်…….……..တကယ်က…ကျနော်အထက်မှာတင်ပြခဲ့သလိုပဲ….တကယ်နိုင်ငံရေးလုပ်လို့…လှုတ်ရှားလို့..ဘယ်လိုပဲ..ပြစ်မှု့ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ တတ်နေပါစေ…သူတို့ဆီမှာ မှတ်တမ်းအပြည့်ရှိပါတယ်….နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးပါဆိုတာ…ဒီလိုလူတွေကို ဆိုလိုတာပါ…………အစိုးရခွဲခြားနိုင်လောက်အောင် အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်……..သူ့ဖာသာသူ ပါတီဝင်ပဲပြောပြော၊ကျောင်းသားပဲပြောပြော…သူ့ပြသနာကြောင့်သူ့ဖာသာသူထောင်ကျတာ….အစိုးရလူကြီးမင်းများ…ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်…..ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်…..မြို့နယ်အသီးသီးမှာလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီက စလို့ ကျောင်းသား၊အလုပ်သမား၊ ရဟန်း သံဃာ တွေ ပြည်သူတွေကို စုံစမ်းလိုက်ရင် သိပါတယ်……..။
(ဘယ်သူ့ကို လွှတ်ပေးစေချင် တာလဲ။ ဘာကြောင့် လွှတ်ပေးချင် တာလဲ အကြောင်းအရာဖော်ပြပြီး ပြောပါလို့ဒီလိုပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။)….ဒါဦးရွှေမန်း…စကားဘယ်သူ့ကိုလွှတ်ပေးစေချင်တာလည်း……….ကျနော် အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ……